Ubaxa PNG | WatercolorPNG
Xirmooyinka gawaarida guga 500 + faylasha
Title Title - $ 19.00
Xuduudaha waxay ka kooban yihiin: 1. Poppies 2. Roses3. Tulips4. Waxyaabaha loo yaqaan 'PeoniesIdeal' ee loogu talagalay DIY, casuumada arooska, kaararka daalacashada, quotesada, blogs, posters ...
Ubax casaan cagaaran png
Tulip guduud biyoodka buluuga ah png oo ah faylalka 26. Waa maxay gudaha: - png 3 files, xubno go'doon ah, 300 ...
Ubax guduudan oo casaan ah png
Roses Reds Watercolor png oo ah faylalka 64. Waa maxay gudaha: - png 19 files, xubno go'doon ah, 300 ...
Ubax casaan orchid Watercolor png
Qeybaha casaanka ee orchid Watercolor png oo ah faylasha 29. Waa maxay gudaha: - png 5 files, xubno go'doon ah, 300 ...
Casaan iyo cagaar Psychotria elata ubax Watercolor png
Psychotria elata Watercolor png column of files 28. Waa maxay gudaha: - jpg 28 faylalka, qaababka iyo xirmooyinka, ...
Ubaxa aquilegia ubax Watercolor png
Pink aquilegia Watercolor png geeska faylalka 66. Waa maxay gudaha: - png 18 files, xubno go'doon ah, 300 ...
Ubax la jeexjeexay ubaxa Watercolor png
lavender Watercolor png clipart of files 17. Waa maxay gudaha: - png 3 files, xubno go'doon ah, 300 dpi, ...
Ubax casaan ah Peony ubax Biyo-jeex
Pony Watercolor Png clipart of faylasha 54. Maxaa gudaha ku jira: - png 7 faylasha, waxyaallaha go'doonka ah, 300 dpi, ...
Purple Freesia ubax Watercolor png
Freesia Watercolor png isugeynta faylalka 28. Waa maxay gudaha: - png 5 files, xubno go'doon ah, 300 dpi, ...
Biyo-kululeeyaha Bouquet Bouquet PNG
Biyaha Dheecaanka Bouquet Bouquet PNG ayaa lagu qoondeeyey faylasha 32. Maxaa gudaha ku jira: - png 32 faylasha, walxaha go'doonka ah, ...
Ubaxii Cosmos Watercolor png
Ubaxyada Cimilada Cimilada Qalabka Cuntada ee 31. Maxaa gudaha ku jira: - png 31 faylasha, walxaha go'doonka, 300 ...
Bouquet leh ubax huruud ah Watercolor png
Bouquet leh ubax jaalaha ah Watercolor png clipart of files 34. Maxaa gudaha ku jira: - png 34 faylasha, go'doomin ...
Muujinaya: 1-12 561 ah
Shan sababood oo lagu iibsado sawirrada sawir-biyoodka
Farsamooyinka biyaha ee dhaqanka ee loo yaqaan 'watercolor' ayaa loo keenay goobaha dhijitaalka ah waxaana lagu soo bandhigaa naqshadayaasha. Waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka hal-abuurka. Sawirado badan ayaa la soo saaraa kaydka maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, baahida loo qabo ubax-boodhka biyaha waa mid mar walba sarreeya. Ururinta buundooyinka biyaha ah ee ubaxa waa tusaale wanaagsan oo ah waxa aad u baahan tahay sameynta qurxinta gudaha, wallpaper, alaabta jilicsan, dharka iyo wixii la mid ah. Waxay yihiin sawirro dhab ah oo sawirro leh, kuwaas oo ay soo saareen farshaxanada ugu caansan Ukraniyaanka. Markaad soo iibsato nooc kasta oo khudrad ah oo ah joodariga sawirlaha ah ee png-ka ah waxaa laguu oggol yahay inaad isticmaashid xitaa qaabeynta alaabta loo diyaariyay iibinta ballaaran.
Eeg hoosta shantii sababood ee aad ugu baahan tahay in aad soo iibsato sawirrada biyaha ee biyaha ee ku yaal dukaanka online-ka ah:
Waxaan u muuqannahay inaan noqonno khayraadka ugu muhiimsan ee sawirada sawir-celinta ee ugu fiican biyaha. Waxaan mar walba isku daynaa inaan isbarbardhigo tayada sarreysa iyo qiimaha macquulka ah Waxaad la yaabi doontaa sida dhabta ah ee aan ugu qanacsanahay arrimaha macaamiisheena.
Tani waxay ururinaysaa sawirada joodariga ah ee sawir-qaadaha ah ee sawir-qaadaha ah ayaa ka kooban waxyaabo kale oo badan oo laga yaabo inaad adiga ku xiiso geliso. Waxaa jira sawirro noocyada kala duwan ee ubaxa, xidhmooyinka, garaafyada sawirada leh iyo walxaha geometrical, xayawaanka qaar iyo xitaa cunto. Waxaad dooran kartaa hal unug (farshaxan gaar ah) ama xirmo oo dhan. Xasuuso, in haddii aad iibsato dhammaan qaybaha, waxaad leedahay fursado dheeraad ah iyo fikradaha hal-abuurka ee mashruucaaga.
Waxaan horay u abuurnay ururinta botanical oo badan oo ka mid ah ubucda ubaxa biyaha. Si kastaba ha ahaatee, marnaba ma joojinayno hagaajinta waxayna kordhineysaa farshaxanka farshaxanka aan bixino. Warcelinta macaamiisha iyo natiijooyinka doorashada iyo sahaminta macaamiisheena ayaa naga caawiya in aan la socono taariikhda.
Markaad iibsato shey waxaa si toos ah loogu keydiyaa alaabta la soo heley si aad u awooddo inaad soo dejiso hal sawir oo biyo ah oo ah ubaxyo badan.
Haddii aad leedahay amar gaar ah oo ay adagtahay inaad ogaato waxa aad u baahan tahay, maamuleyaasheenu waxay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan. Waxaan kuu dooran doonaa noocyada ugu fiican. U sheeg arintaada oo waxay noqon doontaa run.
Hope hadda waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo inaad la shaqeyso adeegyadayada! Ku raaxeyso fursaddan ballaaran ee fursadaha aan ku siino!